पासवर्ड बलियो किसिमको कसैले पनि अनुमान गर्न नसकिने किसिमको राख्नुहोस् जसमा अंग्रेजी ठूला अक्षर तथा अंकहरु मिसिएका १२ वटा अक्षरहरु हुन् ।
हरेक सेवाको लागि राखिने पासवर्ड फरक किसिमको राख्नुहोस् । फरक सेवाको लागि एकै प्रकारको पासवर्ड नराख्नुहोस् ।
तपाईको सामाजिक संजालमा राखिने पासवर्ड भन्दा वित्तीय कारोबारमा राख्ने पासवर्ड फरक राख्नुहोस् ।
तपाईको पासवर्ड कसैसंग पनि नभन्नुहोस्÷नलेख्नुहोस् ।
यदी तपाईको मोवाईल नम्बर तथा ईमेल आईडि परिवर्तन भएको छ भने बैंकमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोस् ।
१. ईमेल सुरक्षा सुत्र
शंकास्पद ईमेल देखि टाडै रहनुहोस् । शंकास्पद ईमेलबाट आएका फाईलहरु खोल्ने कार्य नगर्नुहोस् जबसम्म सो ईमेलको बारेमा पूर्ण जानकारी हुँदैन । यदी तपाईले त्यस्ता किसिमका ईमेलहरु तथा फाईलहरु खोल्नु भयो भने त्यसले तपाईको ईमेल ह्याक गर्ने तथा तपाईको कम्प्यूटरमा पनि गलत किसिमको सफ्ट्वयर राखी त्यसको नराम्रो फाईदा उठाउन सक्नेछ ।
यदी त्यस्तो कुनै प्कारको शंकास्पद क्रियाकलाप शंकास्पद लागेको अवस्थामा तपाईको ईमेलको आईडि लगायत तपाईको खाताको बारेमा कुनै किसिमको शंकास्पद गलत ईमेल प्राप्त भएको आभाष भएमा तुरुन्त बैंकमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
२. अनलाईन बैंकिङ्ग सुरक्षा सुत्रः
अनलाईन बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दा सार्बजनिक स्थानको कम्प्यूटर प्रयोग नगर्नुहोस् ।
तपाईको पासवर्ड बैंकको कर्मचारी तथा अन्य कुनै व्यक्तिसंग पनि सेयर नगर्नुहोस् ।
बारम्बार अनलाईन बैंकिङ्गको पासवर्ड परिवर्तन गर्नुहोस् ।
कमजोर किसिमको पासवर्ड नराख्नुहोस् , पासवर्ड राख्दा कसैले पनि अनुमान गर्न नसकिने किसिमको राख्नुहोस् जसमा अंग्रेजी ठूला अक्षर तथा अंकहरु मिसिएका १२ वटा अक्षरहरु हुन् ।
अनलाईन बैंकिङ्गको लगईन पासवर्ड तथा कारोबार पासवर्ड फरक राख्नुहोस् ।
जब अनलाईन बैंकिङ्गको लागि लगईन गर्नुहुन्छ तब browser लाई "private browsing" मा परिवर्तन गर्नुहोस् ।
अनलाईन बैंकिङ्गको कार्य सकिए पश्चात लगआउट गरी दचयधकभच बन्द गर्न नबिर्सिनुहोस् ।
यहाँको ईमेलमा आएको कारोबारका लगईन आईडि वा अनलाईन सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा ईमेलमा सोधिएमा सो को जवाफ नदिनुहोस् किनकि, बैंकले तपाईको कुनैपनि सूचना माग्दैन बरु त्यसरी ईमेल आएको छ भने तुरुन्त बैंकमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
अनलाईन बैंकिङ्ग प्रयोग गर्नको लागि ईन्टरनेट browser बाट https:// ebanking. muktinathbank. com.np मार्फत खोल्नुहोस् । अनलाईन बैंकिङ्ग प्रयोग गर्नुपूर्व बैंकको ईन्टरनेट साईट देखिएको छ वा छैन हेर्न नभुल्नुहोला ।
अनलाईन बैंकिङ्ग प्रयोग गर्दा कुनै शंकास्पद अवस्था सिर्जना भएको अवस्थामा तुरुन्त बैंकमा सम्पर्क गर्नुहोस् ।
३ ए.टि.एम सुरक्षा सुत्रः
ए.टि.एम प्रयोग गर्ने समयमा आफ्नो वरिपरिको वस्तुस्थिति नियाल्नुहोस् ।
पिनकोड हाल्ने समयमा किबोर्डलाई छेक्नुहोस् कसैले हेरिरहेको हुन सक्दछ ।
ए.टि.एम प्रयोग गर्ने समयमा तपाईको वरिपरि कुनै शंकास्पद व्यक्ति वा वस्तुस्थिति देखेमा ए.टि.एम बुथबाट तुरुन्त बाहिरिनुहोस् ।
तपाईको कार्ड सुरक्षित स्थानमा राख्नुहोस् जहाँबाट चोरी पनि नहोस् र नहराओस् ।
सजिलै सम्झने किसिमको पिनकोड प्रयोग गर्नुहोस् । कार्डको पिनकोर्ड आफ्नो कार्ड धबििभत वा मा नलेख्नुहोस् ।
ए.टि.एम कार्डको पिन कोर्ड बनाउने क्रममा आँफु संग सम्बन्धित कुनै पनि नम्बरहरु प्रयोग नगर्नुहोस् । जस्तैः तपाईको जन्म मिति, फोन नं, सवारी साधन नम्बर आदि ।
कार्ड चोरी भएमा वा हराएमा तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोस् ।
४. मोबाईल फोन सुरक्षा सुत्रः
यहाँले प्रयोग गर्ने मोबाईलबाट हुन सक्ने ठगीबाट बच्नको लागि मोबाईल बैंकिङ्ग प्रयोग गर्ने अवस्थामा आँफु सचेत र सुरक्षित भएर प्रयोग गर्नुहोस् ।
मोबाईल बैंकिङ्गको प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने साबधानीहरुः
मोबाइृल बैंकिङ्गको प्रयोग गर्दा आफ्नो सुरक्षा अपनाउँदा अन्य कसैले बुझ्ने किसिमको बाटो नअपनाउनुहोस् ।
पासवर्ड प्रयोग गर्दा अरुले अनुमान गर्न सक्ने किसिमको प्रयोग नगर्नुहोस् । जस्तै यहाँको जन्म मिति, सवारी साधन नम्बर आदि ।
जब पिन प्रयोग गनुृहुन्छ त्यस अवस्थामा कसैले नदेख्ने गरी पिन प्रयोग गर्नुहोस् ।
सुरक्षाको लागि समय समयमा पिन कोड परिवर्तन गर्नुहोस् ।
मोबाईल बैंकिङ्गको प्रयोग गरी सके पश्चात पिन लगआउट नगरी मोबाईल नछाड्नुहोस् ।
मोबाईल बैंकिङ्गको प्रयोग गर्ने क्रममा आवश्यक भाईरस तथा अन्य सुरक्षाको लागि स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ सो सम्बन्धमा उपयुक्त विधि अपनाउनुहोस् ।
मोबाइृल बैंकिङ्गको प्रयोग गर्दा मोबाईल बाहेक अन्य डिभाईसबाट नखोल्नुहोस् । जहाँबाट तपाईको सम्पूर्ण सूचनाहरु अरुले सहजै पत्ता लगाउन सक्नेछन् ।
जबसम्म तपाईले प्रयोग गर्नु भएको मोबाइृल बैंकिङ्ग लगअफ गर्नुुहुन्न तबसम्म मोबाईल बैंकिङ्गको प्रयोग गर्दा यहाँले दिनु भएको सम्पूर्ण सूचनाको पूर्ण जिम्मेबारी यहाँ नै हुनु हुने छ ।
मोबाईल बैंकिङ्गको सम्पूर्ण सुरक्षा निति सम्बन्धमा तपाई नै पूर्ण जिम्मेबार व्यक्ति हुनुहुने छ।
यहाँको मोबाईल नम्बर परिवर्तन भएको अवस्थामा सोको जानकारी बैंकलाई दिनुहोस् ।
मोबाइल उपकरणहरूमा स्थान ट्र्याकिंग–– मोबाइल उपकरणहरूमा केहि अनुप्रयोगहरूले तपाईंको स्थानको बारेमा हामीलाई जानकारी प्राप्त हुने छ यदीे तपाईं त्यस्तो स्थान ट्र्याकिंगको जानकारीको लागि अनुरोध गर्नुहुन्छ।
उल्लेखित सुरक्षा सुत्र तोडेको अवस्थामा?
यदी यहाँको मोबाईल बैंकिङ्गको सुरक्षा सम्बन्धमा कुनै शंकास्पद अवस्था सिर्जना भएमा वा मोवाईल हराएमा तुरुन्त यस विकास बैंकको डिजिटल बैंकिङ्ग ईकाईको मोबाईल नम्बर ९८०२३०६८८९ मा सम्पर्क गर्नुहोस् ।